စာဖတ်ခြင်း/ဝဘ်/အဆင့်မြင့် မိုဘိုင်းပံ့ပိုးမှုများ - MediaWiki
This page isatranslated version of the page Reading/Web/Advanced mobile contributions and the translation is 1% complete.
အဆင့်မြင့်မိုဘိုင်းပံ့ပိုးကူညီမှုမုဒ်သည် မိုဘိုင်းဝဘ်အတွေ့အကြုံတွင် ပံ့ပိုးပေးသူ၏အင်္ဂါရပ်များ/စွမ်းရည်များကို ပိုမိုထည့်သွင်းပေးမည့် အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့်မုဒ်ကိုဖွင့်ရန်၊ မိုဘိုင်းဆိုက်ရှိ သင်၏ဆက်တင်များစာမျက်နှာသို့သွား၍ "အဆင့်မြင့်မုဒ်" ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဝဘ်ဆိုက်၏ ဒက်စတော့ဗားရှင်းနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ဆင်တူစေရန် လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် special pages ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ချဲ့ထွင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်နေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းလိုသော အင်္ဂါရပ်များ/စွမ်းရည်အမျိုးအစားများကို ကြည့်ရှုရန် အောက်ပါ ဘာတွေပြောင်းလဲနေလဲ ကဏ္ဍသို့ ခုန်ပါ။
၁ Project Summary
၁.၁ Condensed process overview
၁.၁.၁ 1. Introduction
၁.၁.၂ 2. Research
၁.၁.၃ 3. Design & Testing
၁.၁.၄ 4. Deployments
၁.၁.၅ 5. Results
၃.၁ October 10, 2019 - Advanced mode is now deployed everywhere
၃.၂ August 8, 2019 - Advanced mode now deployed to every Wikipedias
၃.၃ August 6, 2019 - AMC almost complete
၃.၃.၁ AMC deployments
၃.၃.၂ Data so far
၃.၄ May 8, 2019 - AMC main menu now deployed on Arabic, Indonesian, and Spanish Wikipedias
၃.၄.၁ Main menu examples
၃.၅ March 27, 2019 - First AMC deployment on Arabic, Indonesian, and Spanish Wikipedias
၃.၅.၁ Opting In
၃.၅.၂ Talk Page Navigation
၃.၅.၃ History Page Navigation
၃.၆ January 14, 2019 - Getting started with Talk page links
၃.၇ November 12, 2018 - Navigation prototype feedback summary
၃.၇.၁.၁ Questions and concerns:
၃.၇.၃ Known prototype bugs
၃.၈ September 18, 2018 - Need your help! Collecting feedback for the new navigation prototypes
၃.၈.၁ Preview of prototype
၃.၉ August 24, 2018 - Published results from Wikimania interviews
၃.၁၀ August 7, 2018 - Wikimania interviews
၃.၁၁ June 20, 2018 - IRC office hours
၃.၁၂ May 19, 2018 - Themes from Barcelona Hackathon conversations
၄ Project background
၅ What is changing?
၅.၁.၂ Special Pages
၅.၃.၁ Per project
၅.၄.၂ Other potential metrics
၅.၅ New functionality
၅.၇.၁ Technical estimates
၅.၇.၂ Working with the communities
၅.၈ Next Steps
၆ Rationale for choosing this technical approach
၆.၂ Technical Rationale
၆.၃ Community risk and adoption rationale
Retrieved from "https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Reading/Web/Advanced_mobile_contributions/my&oldid=5211997"
Last edited on 15 May 2022, at 14:19